အောက်တိုဘာလ 2018 |5၏စာမျက်နှာ 62 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2018 » အောက်တိုဘာလ (စာမျက်နှာ 5)
အမေဇုံက Web Services ကအတူ cloud-ဇာတိတီဗီ software ကိုသရုပ်ပြ Edgeware
ယနေ့ဂျပန် Edgeware အတွက်အင်တာမီလန်ပျား 2018 မှာ containerized တီဗီမူရင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုပြသနိုင်ဖို့ Edgeware က Chiba, ဂျပန်အတွက်အင်တာမီလန်ပျား tradeshow မှာ၎င်း၏ cloud-ဇာတိ software ကိုသရုပ်ပြလိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ Edgeware ၏ဆော့ဖ်ဝဲ OTT တီဗီချို့ယွင်း-အခမဲ့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာကြော်ငြာထည့်သွင်းရန်အတွက်စီးပြင်ဆင်နေ, အမေဇုံက Web Services က (AWS) ရက်တွင်ကွန်တိန်နာထဲမှာ run ပါလိမ့်မယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အများစုကမိုဃ်းတိမ်ကိုချမှတ်ထားပါသည် ...
Broadpeak ကုန်ပစ္စည်းများ AfricaCom 2018 မှာ
OTT တီဗီနှင့်ဗီဒီယိုနှင့် ပတ်သက်. မကြာသေးမီကအစီရင်ခံစာများတွင် ResearchAndMarkets တက် 9.99 ရဲ့အဆုံးမှာ 35 သန်းကနေ 2023 အားဖြင့် 1.56 ဆာဟာရအာဖရိကနိုင်ငံများတလွှား 2017 သန်း SVOD subscriber များအားရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ OTT ဗီဒီယိုကိုစားသုံးမှုကြီးထွားလာမှုနှင့်အတူဒေသတွင်း၌အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးနဲ့ပေးဆောင်-TV ကိုအော်ပရေတာမဆိုကျော်မဆိုမျက်နှာပြင်မှအကြောင်းအရာများပို့ဘို့အရွယ်မှာ, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ပါတယ် ...
မာရှယ်အီလက်ထရောနစ်မိတ်ဆက်နယူး V-LCD173HR ထုတ်လုပ်မှုု့ကပ်ရေး
TORRANCE,, CA, အောကျတိုဘာ 29, 2018 - မာရှယ်အီလက်ထရောနစ် HDMI / HDSDI ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းရည်, မာရှယ် V-LCD17.3HR နှင့်အတူသစ်တစ်ခု 173 လက်မအရွယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုမော်နီတာကြေငြာလိုက်သည်။ တစ်ဦးစွယ်စုံ 6RU ဒီဇိုင်းအတွက်ဆောက်လုပ်ထားမာရှယ် V-LCD173HR built-in Histogram, Peak, မှားယွင်းသောအရောင်, ထိတွေ့မှု, ချိန်ညှိဘေးကင်းလုံခြုံရေးအမှတ်အသားများနှင့်ထို့ထက် ပို. နှင့်တကွကြွလာနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာနှစ်ခုအော်ဒီယိုချန်နယ်မှတက်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မာရှယ် V-LCD173HR HDMI နှစ်ဦးစလုံးရှိတယ် ...
ရာထူး: အငယ်တန်း Visual ဒီဇိုင်နာကုမ္ပဏီ: Internet Marketing SEO ဆိုသည်မှာ INC တည်နေရာ: ။ San Diego မှ, CA အမေရိကန်ပို >>
ရာထူး: ထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: မင်နီဆိုတာယူနိုက်တက် FC အသင်းတည်နေရာ: ရွှေတောင်ကြား MN အမေရိကန်ပို >>
ကို Creative စစ်ဆင်ရေး & အကြောင်းအရာစတူဒီယို Internship
ရာထူး: ကို Creative စစ်ဆင်ရေး & အကြောင်းအရာစတူဒီယို Internship ကုမ္ပဏီ: Hourglass အလှကုန်တည်နေရာ: ဗင်းနစ်, CA အမေရိကန်ပို >>
ရာထူး: စနစ်များအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: Borsight Inc မှတည်နေရာ: အော့ဒန်ဝင်း UT အမေရိကန်ပို >>
Technicolor PostWorks အဆိုပါဆဋ္ဌမနှင့် The အမေရိကန်များ၏နောက်ဆုံးသူဟာ Emmy ဆုအနိုင်ရစီးရီး, စစ်အေးခေတ်ကာလအတွင်း 4s သတ်မှတ်ကာလသူလျှိုသည်းထိတ်ရင်ဖိုမှာ HDR နှင့် 1980K က Ultra HD ကိုများအတွက်အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောစီးရီးခြောက်လ, မကြာသေးမီကအတွက် Technicolor PostWorks မှာ HDR နှင့် 4K က Ultra HD မှာပြီးဆုံးခဲ့သည် နယူးယောက်။ စီးရီးနှစ်ခုကတည်းကချောစီးရီး၏အသွင်အပြင်ရှိပါတယ် ...